Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jabinta Wararka Seychelles » Shaybaarka tijaabada cusub ee 24/7 COVID-19 ee Seychelles wuxuu siinayaa dadka socotada ah fursado badan » Page 2
Jebinta Wararka Caalamka • Jabinta Wararka Seychelles • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Investments • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Shaybaarka cusub wuxuu ka baaraandegi karaa in ka badan 30,000 oo baaritaan maalintii iyo baaritaannadu waxay la socon karaan dhammaan hiddo-wadayaasha la yaqaan iyo noocyada kala duwan ee COVID-19.
Xarumaha waxay bixiyaan tijaabooyin kaladuwan oo buuxa oo loogu talagalay dadka safarka ah oo ay kujiraan Tijaabada Rapid Molecular COVID-19 Test, the Gold standard Polymerase Chain Reaction (PCR) Test, Rapid Antigen Test and Antibody Test.
Shahaadooyinka Safarka ama natiijooyinka imtixaanka waxaa lagu soo saari doonaa emayl gudahood 24 saacadood gudahood marka imtixaanka lagu qaadanayo adeegga caadiga ah, halka adeegga degdegga ah lagu heli karo natiijooyinka 8-10 saacadood gudahood. Adeeg-dhakhso leh ayaa natiijada ku soo celin kara 2-3 saacadood haddii loo baahdo.
Macaamiisha doonaya raaxeysiga iyo qarsoodiga ugu dambeeya, Adeegyada Caafimaadka ee Seychelles sidoo kale waxay leeyihiin siddeed Koox Takhasus gaar ah leh oo ku soo booqan kara iyaga oo ku jira qolka hudheelkooda, ama xitaa doontooda, si ay u maamulaan imtixaanka.
Adeegyada Caafimaadka ee Seychelles, oo uu iska leeyahay Mr Justin Etzin, ayaa hadda leh shaybaarka ugu weyn ee COVID-19 ee ku yaal Badweynta Hindiya.
Mr Etzin wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu soo bandhigo shaybaarka cusub iyo tas-hiilaadka si loogu helo ikhtiyaar tijaabo ah oo tijaabo ah rakaabka baxaya iyo dadka deegaanka intaba.
“Waan ku faraxsanahay inaan sameyneyno qeybteena iyo inaan noqono ikhtiyaar kale oo suuqa yaala oo ah baaritaanada muhiimka ah. Waxaan u soo bandhigi doonaa safarrayaasha adeegga kaliya ee 24/7 ka socda Seychelles oo leh tijaabooyin la isku halleyn karo oo dhakhso leh oo COVID-19 ah oo loogu talagalay baahidooda safarka, ”ayuu yiri.
“Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay xilli ay sii kordhayaan taraafikada rakaabka ee dalka imanaya. Adeegayagu wuxuu ku baxaa goobo casri ah oo heegan ah oo furan saacad kasta ama haddii uu ka sahlan yahay waanu kuu iman doonaa.
Madaxa Fulinta ee Golaha Dalxiiska Seychelles, Sherin Francis ayaa soo dhaweysay ku darista xarun cusub oo tijaabo ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha Mahe, iyo dhowaan jasiiradaha kale.
"Annaga, ganacsiga dalxiiska, waxaan fahannay oo aan qadarinaynaa muhiimadda ay leedahay in aan helno tasiilaad ku filan oo ku habboon taas oo siin doonta booqdayaasheena xasiloonida maskaxda," ayay tiri.
"Waxaan u mahadcelineynaa Seychelles Medical Services Pty iyo dhamaan rugaha caafimaadka ee kale ee bixiya adeegan lagama maarmaanka ah oo aan laga maarmin, gaar ahaan tirada dalxiisayaashu way sii kordhayaan waana inaan isu diyaarino marka dalal badan ay u furan yihiin safarka."
Mrs Francis waxay xustay in maadaama talaalada talaalku ay isku urursanayaan aduunka oo dhan dalal badana ay u badan tahay inay ka soo baxaan xirxirida, safarka xagaaga ee yurub wuxuu u muuqdaa mid macquul ah.
"Waxaan la tacaali doonnaa culeysyo badan oo codsiyo ah waxaanna aaminsanahay in dadka safarka ah la siiyo xulasho ballaaran oo ah halka ay ku qaadi karaan imtixaannada, waxay muhiim u tahay in laga caawiyo dalxiiskeenna dib u soo kabashada," ayay tiri.
Xarumaha kale ee gaarka loo leeyahay ee bixiya adeegyada la xiriira COVID-19 ee Seychelles waa Euro Medical Family Clinic, Xarunta Daryeelka Mustaqbalka iyo adeegyada daryeelka caafimaadka ee Victoria.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan adeegyada baaritaanka COVID-19 ee laga bixiyo Seychelles, booqdayaasha ayaa booqan kara la-talinta STB https://advisory.seychelles.travel